Raysal Wasaare Kheyre Oo Xalay Markii Ugu Horraysay Kulan La Qaatay Prof Jawaari Iyo Kulan Xasaasi Ah Oo Maanta Loo Ballansan Yahay | Haqabtire News
Raysal Wasaare Kheyre Oo Xalay Markii Ugu Horraysay Kulan La Qaatay Prof Jawaari Iyo Kulan Xasaasi Ah Oo Maanta Loo Ballansan Yahay
Muqdisho:-(HTN) Guddoomiyaha xilka iska casilay ee Baarlamaanka Prof. Maxamed Cismaan Jawaari ayaa maanta markii ugu horeysay tan iyo wixii ka danbeeyay khilaafkii siyaasadeed ee soo kala dhax-galay golleyaasha dowladda ka soo hor muuqanaya fadhiga Baarlamaanka isaga oo wada jir xildhibaannada khudbad ugu jeedin doona.
Maalintii shalay ayuu dib u dhacay kulankii la filayay in guddoomiye Jawaari uu khudbad is casilaadiisa la xiriirta ka jeediyo sababo lagu sheegay khilaaf ka dhashay habka kulankaa loo iclaamiyay.
Maalintii shaley ayaa xildhibaannada iyo wariyayaasha loo kala diray fariimo la xiriira kulanka maanta ee khudbad jeedinta Jawaari kulanka oo noqonaya mid aan caadi aheyn madaama maanta Khamiis ah aysan ka mid aheyn maalmaha shaqo.
Dhinaca kale, Ra’iisal wasaare Xassan Cali Kheyre ayaa xalay hoygiisa ku booqday guddoomiyaha is casilay ee Golaha Shacabka Prof Jawaari oo khilaaf xoog leh uu soo kala dhaxgalay mudadii ay jirtay xiisada siyaasadeed ee baarlamaanka, kaddib markii Jawaari uu ku eedeeyay ra’iisal wasaare Kheyre in uu gadaal ka riixayo mooshinka isaga ka dhanka ah.
Lama oga dhab ahaan waxa ay ka wada hadleen labada mas’uul, hasse ahaatee sawiro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa la arkayay labada mas’uul oo ay wehliyaan xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka oo wada duceysanaya.